British Council မှဖွင့်သော Primary Plus Online အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း (၇ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အထိ) | Edge.com.mm : Best Education Guide in Myanmar
British Council မှဖွင့်သော Primary Plus Online အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း (၇ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အထိ)
Primary Plus ဆိုတာဘာလဲ?
Primary Plus ဆိုတာ ကလေးတွေအတွက် ပျော်စရာကောင်းပြီး ထိရောက်မှုလည်းရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံပြင်၊ သီချင်း၊ ကဗျာ၊ ဂိမ်းကစားနည်းများနှင့် လက်မှုပညာတွေပါဝင်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေပြုလုပ်ရင်း ဘာသာစကားစွမ်းရည် (၄) မျိုးကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ အသုံးချတတ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သုတေသန ပြုချက်များအရ ဤနည်းလမ်းက ကလေးငယ်များအား ဘာသာစကား အသစ်တစ်ခုကို မှတ်မိလွယ်ပြီး အသံထွက်များကိုလည်း ကျွမ်းကျင်အောင် အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အွန်လိုင်းအတန်းတွေနဲ့ ပုံမှန်အတန်းတွေ ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ?
Primary Plus Online မှာတက်ရောက်ခြင်းဖြင့် သင့်ကလေးသည် အရည်အသွေးမြင့် သင်ကြားမှုနှင့် အဆင့်မြင့်အတွေ့အကြုံများရရှိမှာဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏နေအိမ်မှ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ သင်ယူမှုတစ်ခုကိုစတင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းအတန်းတွေဟာ ပုံမှန်အတန်းတွေလိုပဲ ထိရောက်မှုရှိပြီး Zoom software ကိုအသုံးပြုကာ ပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်အတန်းတွေအတိုင်း အွန်လိုင်းစာသင်ခန်းတွေမှာလည်း ခွဲထွက်ဆွေးနွေးခြင်း၊ မေးဖြေတုန့်ပြန်ခြင်းနဲ့ ပြန်လည်တင်ပြခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာများကိုလည်း ဒီဂျစ်တယ် ဖိုင်များနေနဲ့ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
- အမြန်နှုန်းကောင်းသည့် အင်တာနက်
- စာရွက်နှင့် ခဲတံ
- Zoom အပလီကေးရှင်း
ဗြိတိသျှကောင်စီအနေဖြင့် Zoom နှင့် license agreement ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆရာ/ဆရာမ များအတွက်ပြုလုပ်ထားပြီး ဒီလိုင်စင်မှာ ဆိုလို့ရှိရင် လုံခြုံရေးအတွက် အထူးကြပ်မတ်မှု များရှိပြီး ၎င်းတို့ဟာအမြဲတမ်း up-to-date ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ codes များကို public အနေဖြင့် အားလုံကိုမျှဝေမှုမရှိပါ။ ထို့အပြင် စာသင်ခန်းအတွင်းသို့ဝင်ရောက်မှုပြုလုပ်နိုင်သူများကိုလည်း waiting rooms များထားရှိ၍ ကျောင်းသားများရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန် အောက်ဖော်ပြပါဤဖောင်ကိုဖြည့်ပါ။
ဖောင်ဖြည့်ရန် >>> https://bit.ly/3rbvzZy
အေသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ Facebook messenger မှတဆင့်ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။Facebook messenger >>> https://bit.ly/3mxC996
၀၉၇၇၇၀၀၁၈၀၈၊ ၀၉၇၇၇၀၀၁၈၂၂ တို့မှတစ်ဆင့် ဖုန်းဖြင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Latest Post Tips Read 311 times